Ebe ezumike akpụkpọ ụkwụ na-ekpughe akpụkpọ ụkwụ Royal Bahamian ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Ebe ezumike akpụkpọ ụkwụ na-ekpughe akpụkpọ ụkwụ Royal Bahamian ọhụrụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • culinary • omenala • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ okomoko • Resorts • Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Akpụkpọ ụkwụ Royal Bahamian
N'ịgbaso mgbanwe ọtụtụ nde dollar, Sandals Resorts International (SRI) na-ekpughere atụmatụ taa maka ebe ezumike ya na Nassau, Bahamas, bụ akpụkpọ ụkwụ Royal Bahamian ọhụrụ. Ezubere iji mee mmemme mmụọ dị mfe nke Bahamas site na ahụmịhe sitere n'ike mmụọ nsọ na mpaghara yana echiche nke ọgbara ọhụrụ maka okomoko, ndị isi ịhụnanya na ihunanya na sandals ga-emepe ụlọ oriri na ọṅụṅụ ha, spa na agwaetiti nke nwere mmeri maka oge oyi na-amalite na Jenụwarị. Ọktoba 27, 2022.
Atụmatụ maka akpụkpọ ụkwụ Royal Bahamian echegharịrị na-arụ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ atọ.
Ebe ezumike a emezigharịrị ga-eji ụlọ ọhụrụ mara mma, ahụmịhe sitere n'ike mmụọ nsọ meghere, iri nri emelitere, na ndị ọzọ.
Atụmatụ ọhụrụ a bụ akụkụ nke atụmatụ ka ukwuu n'ofe nzukọ a iji gosipụta n'ezie ebe ndị Caribbean pụrụ iche.
"Anyị na-dialing na okomoko na dabere n'ime mfe-aga mmụọ nke Bahamas iji wepụta ahụmịhe na-enweghị atụ na ezigbo dị ka anyị masịrị ikwu, na-eme ka ịhụnanya dịrị mfe,” Onye isi oche SRI Adam Stewart kwuru. "Site n'ime obodo ọhụrụ nke ụlọ ndị nwere agba agba pastel na Coconut Grove, ebe ezumike ọhụrụ anyị dị n'èzí na ebe ntụrụndụ ruo n'àgwàetiti anyị dịpụrụ adịpụ nke agbanweela ka ọ bụrụ ebe nzuzo ịhụnanya, oge ọ bụla, ebe ọ bụla nke ndị ọbịa na-emetụ aka na ahụmahụ na-agụnye ọmarịcha a. ebe aga. Anyị enweghị ike ichere ịnabata ndị ọbịa na Nassau na nke ọhụrụ Akpụkpọ ụkwụ Royal Bahamian. ”
Dị ka onye isi oche SRI Adam Stewart si kwuo, atụmatụ maka Sandals Royal Bahamian na-arụ ọrụ kemgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ atọ ma bụrụ akụkụ nke atụmatụ ka ukwuu n'ofe nzukọ ahụ iji gosipụta n'ezie ebe Caribbean pụrụ iche ebe Sandals Resorts na-arụ ọrụ na imewe, ngwaahịa. onyinye na ụdị ọrụ okomoko.
Ihe echegharịrị Mmeri mmeri Sandals Royal Bahamian ga-egosipụta:
Akpụkpọ ụkwụ Royal Bahamian ebulila ọtụtụ nhọrọ ebe obibi ya na mgbakwunye na nnukwu ụlọ osimiri mara mma nke aha ya bụ East & West Bays, ihe karịrị ọnụ ụlọ 200 emezigharịrị nke ọma na ọnụ ụlọ yana ihe ọhụrụ niile. Obodo nta Island. Obodo ọhụrụ ahụ nwere agba pastel sitere n'ike mmụọ nsọ nke Bahamian Islands ma nwee ọmarịcha ụlọ ime ụlọ nke ọ bụla akpọrọ aha agwaetiti dị na Bahamas nwere ọdọ mmiri nke ya.
Aki oyibo Grove
Ihe mgbakwunye ọhụrụ na ihe onwunwe bụ Aki ọka, Mpaghara ezumike sara mbara na-agbatị vibes osimiri Bahamian ruo etiti ebe a na-eme njem ma ehihie na abalị. N'okpuru nkwụ aki oyibo, ntọala ọhụrụ ahụ na-anya isi nhọrọ oche, egwu ndụ & ntụrụndụ, echiche na-enweghị atụ nke oke osimiri na gwongworo nri ọhụrụ 3. All akpụkpọ ụkwụ 'mbụ,' ọbịa nwere ike ijide a ụtọ ọgwụgwọ ma ọ bụ kọfị na Ụtọ n Tings, banye na nri Bahamian fusion sitere n'ike mmụọ nsọ na nri mmiri ọhụrụ na Coco Queen, ma ọ bụ họrọ maka Italian classic na Bahama Mamma Mia.
Osimiri ndị gbahapụrụ agbahapụ na coral reef ndị mara mma na-echere n'àgwàetiti nzuzo zoro ezo nke ebe ahụ. akpụkpọ ụkwụ Cay efu. Di na nwunye nwere ike ịkwọ ụgbọ mmiri gaa n'ebe zoro ezo n'àgwàetiti ahụ wee nọrọ ụbọchị ahụ ka ha na-akpagharị n'ikpere mmiri dị jụụ nke na-egosi ụlọ mmanya osimiri, ebe obibi mara mma, ịsa ahụ n'èzí na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọhụrụ, Ụlọ nke Aralia, na-enye nri mmiri ọhụrụ site na ụgbọ mmiri gaa na tebụl na ezigbo nri Caribbean.
Nleba mbụ na emume mgbede ọdịnala
Maka ndị bịarutere n'oge, Sandals Royal Bahamian na-anabata nnabata mbụ site na mmemme ọhụrụ ha. The Breakaway. Mgbe ọ bịarutere, onye nnabata raara onwe ya nye ga-eduru ndị ọbịa gaa n'ụlọ ezumike ahụ nwere mmanya mbinye aka n'aka iji mee ka ọ dị ọhụrụ na isi na ọdọ mmiri ahụ ozugbo ka ọ na-elekọta ndị ọzọ. Mgbe anyanwụ dara, ndị di na nwunye nwere ike isonye na omenala conch ịfụfụ nke a na-ekwu na-anabata ịhụnanya na ezigbo akụ. Ememe a na-eso rake na egwu scrape na mmanya Bahamian nwere ikuku oké osimiri.
Nhọrọ iri nri ọhụrụ
Sandals Royal Bahamian ga-ewebata ụlọ oriri na ọṅụṅụ ise ọhụrụ mgbe ọ ga-emepe n'oge oyi a gụnyere Nku maka nri French mara mma; Omenala British Pub Ọla eze nwanyị; Kanoo maka nri na-eme ememe mpaghara Caribbean, Ụlọ Butch's Island Chop maka steaks ejiri aka gbuo, fillet azụ na nri mmiri a kwadebere ịtụ na ntụpọ sushi ọhụrụ Soy.
Site n'ebe a na-esi nri n'akụkụ osimiri na-eri nri na-atọ ụtọ na salads ọhụrụ ruo na-esi ísì ụtọ nke ngwa nri ndị Japan na-atọ ụtọ nke ọma, akpụkpọ ụkwụ Royal Bahamian ọhụrụ ga-etu ọnụ na nhọrọ iri iri na atọ.
Iji mụtakwuo na akwụkwọ ọnụnọ na sandals Royal Bahamian ọhụrụ, gaa na sandals.com/royal-bahamian/renovations.
Resorts Sandals® na-enye mmadụ abụọ ịhụnanya kachasị nwee ịhụnanya, okomoko gụnyere njem ezumike na Caribbean. Na ntọala 15 dị n'akụkụ osimiri na Jamaica, Antigua, Saint Lucia, The Bahamas, Barbados, Grenada, na 16th Ọnọdụ na-abịa na Curacao Spring 2022, Sandals Resorts na-enye ọtụtụ ntinye gụnyere karịa ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eme njem na mbara ala. Mbinye aka Nhụnanya Nest Butler Suites® maka nke nzuzo na ọrụ; ndị ọrụ ọzụzụ ọzụzụ nke Guild of Professional English Butlers zụrụ azụ; Uhie Red Lane; 5-Star Global Gọọmet ™ iri, huu top-shelf mmanya, adịchaghị mmanya, na Gọọmet ọpụrụiche ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ;ụ; Lọ Ọrụ Aqua na ọkachamara PADI® ọkachamara na ọzụzụ; Wi-Fi ngwa ngwa site na ụsọ oké osimiri ruo n'ọnụ ụlọ na akpụkpọ ụkwụ A na-ahụkarị Agbamakwụkwọ Agbamakwụkwọ bụ naanị Sand Resorts Resorts. Resorts Sandals na-eme ka ndị ọbịa nwee udo nke uche site na mbata na ịpụ na ndị Protocols Sandal nke Platinum nke linessdị Ọcha, ụlọ ọrụ ahụ kwalitere ahụike na nchekwa nchekwa iji nye ndị ọbịa obi ike mgbe ha na-ezumike na Caribbean. Sandals Resorts bụ akụkụ nke ezinụlọ Sandals Resorts International (SRI), nke onye nwụrụ anwụ Gordon “Butch” Stewart hiwere, nke gụnyere Beaches Resorts ma bụrụkwa ụlọ ọrụ na-ahụ maka ezumike na Caribbean na-eduga niile. Maka ozi ndị ọzọ gbasara ọdịiche Sandals Resorts Luxury Included®, gaa na sandals.com. www.sandal.com.